စတင်လေ့လာသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက် ၁၀ ချက် | Martech Zone
ဒါကြောင့်သင်ဟာလျင်မြန်စွာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကမှာသွားကိုဖြတ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်မှာသေချာသော်လည်းသင့်အနေဖြင့်အချိန် - စမ်းသပ်စစ်ဆေးသောအကြံဥာဏ်များကိုလက်ခံရန်နှင့်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မည်သို့ကျင့်သုံးရမည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း၌သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ ကြီးထွားရန်နှင့်ရှင်သန်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်အရေးကြီးသောအချက်ကိုးချက်အတွက်ဆက်ဖတ်ပါ။
Inquisitive လုပ်ပါ - သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အသုံးပြုရန်၎င်းတို့ထံမှရရှိသောအရာများကိုရှာဖွေရန်အတွက်အခြေအနေများ၊ နည်းပညာများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်။ သင့်မှာစိတ်ဓာတ်မှန်ရှိရင်၊ သင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆစကားပြောခြင်းကနောက်ဆုံးဖောက်သည်ရဲ့စာအုပ်ခရီးစဉ်ကိုဘယ်လိုတိုးမြှင့်မလဲဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်အသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ယင်း Box ကိုပြင်ပစဉ်းစားပါ - အတွေ့အကြုံရင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင့်ရွယ်တူချင်းများကြားတွင်လုပ်သက်ရင့်လုပ်ငန်းမရှိပါ။ ထိုအဖြစ်မှန်ကြောင့် ပို၍ အတွေ့အကြုံရှိသူများရရှိနိုင်သောအဆက်အသွယ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များသည်သင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှု၌ဤအချိန်၌သင့်ကိုအကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သို့သော်စိတ်ဓာတ်ကျစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းလိုသည့်လှည့်ကွက်များနှင့်နည်းများထက် ကျော်လွန်၍ စဉ်းစားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းပါ။ သင်၏ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိမှုသည်ဖောက်သည်များအတွက်အကျိုးအမြတ်များနှင့်ရွယ်တူချင်းများထံမှလေးစားမှုကိုရရှိနိုင်သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအကျင့်ကိုကျင့်ရန်မျှော်လင့်ချက်များကိုမဟန့်တားသောနည်းများဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမေးပါ။ငါပျောက်နေတာတစ်ခုခုရှိလား။"သို့မဟုတ်"ငါမတူညီတဲ့လမ်းအတွက်ဤအကြောင်းကိုသွားနိုင်မလား?
Pro လိုပဲ Network - သင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌အသစ်ဖြစ်နေသောကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိဟုထင်မြင်ခံရပြီးအနည်းဆုံးလူအနည်းငယ်ကသင့်အားသင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသေးသောဗဟုသုတနှင့်အတူခံစားရလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသင်အောင်မြင်ဖို့အခြားသူတွေကိုသင်ပြနိုင်ဆဲပါ အကောင်းဆုံးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်သူဖြစ်ရန်သင်ယူခြင်း.
နေ့လည်စာစားချိန်၊ ရထားပေါ်မှာထိုင်နေစဉ်၊ သင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စကားပြောနေစဉ်သင်၏အလုပ်အကိုင်အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းပြောဆိုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။ သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအခြားအဆင့်သို့တက်နိုင်မည့်အလားအလာရှိသောမဟာမိတ်နှင့်တွေ့ဆုံသူမည်သူကိုမဆိုစဉ်းစားပါ။ စီးပွားရေးကဒ်ပြားများကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ “ တစ်ယောက်ယောက်က“ ဒါဆိုမင်းဘာလုပ်လဲ” ဟုမေးသောအခါသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်“ ဓာတ်လှေကားမိန့်ခွန်း” အနည်းဆုံးတစ်ခုကိုရေးပါ။ အချိန်တိုင်းတွင်သင်၏အကောင်းဆုံးအပြုအမူကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ။
သင်၏စာများကိုထိန်းချုပ်ပါ - ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းသည်သင်ထင်သလောက်မလွယ်ကူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သောအရာများရှိသည်။ စကားဝိုင်းများ၊ ဆက်စပ်ပုံပြင်များနှင့်ရယ်စရာကောင်းသောဥပမာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်ပေးပို့သောသတင်းစကားအချို့ကိုသင်စီမံနိုင်သည်။ သို့သော်လူတို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းတို့ကြားသိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုယူပြီးသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအတိတ်အတွေ့အကြုံများနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင်သည်ထိုရှုထောင့်ကိုမထိန်းချုပ်နိူင်သော်လည်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုမည်သို့ခံယူသည်ကိုသင်အားစိုက်ထုတ်နိုင်သည်။
ထိုသို့ပြုရန်နည်းတစ်နည်းမှာနားထောင်သူ၌သတိပြုမိသောကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားကိုဟောပြောသူကတုပသည့်နည်းစနစ်ကျသောရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထင်ဟပ်ပြသမှုသည်အပြန်အလှန်တည်ဆောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်သင်၏ရှေ့မှောက်တွင်လူများကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ကူညီပေးသည်။ လေ့လာမှုအချို့အရ ရောင်းအား ၁၂.၅ မှ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသို့တိုးလာသည် mirroring နည်းစနစ်အကောင်အထည်ဖော်ကြသောအခါ။
စျေးကွက်မက်ထရစ်နှင့်သင့်ကိုယ်သင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေပါ - သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်မလုပ်သိရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး သည် ၁၀ နှစ်တာကာလပြီးနောက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သောဂီတစူပါစတားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အဓိကမဂ္ဂဇင်းများတွင်စာမျက်နှာအပြည့်အစုံကိုဖွင့်ပြီးသီးသန့် Youtube ကင်ပိန်းကိုစဖွင့်ပြီးနောက်တစ်ပတ်အလိုတွင်သူမ၏ Billboard အဆင့်သည်လျင်မြန်စွာမြန်ဆန်သွားသည်ဟုသင်ပြောခဲ့သည်။ ဖြန့်ချိမှုကိုကြေငြာရန်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာများသည်ဇယား၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် လျော့နည်းသိသာမက်ထရစ်အပေါ်အားကိုး သင်လုပ်နေတာကအသုံး ၀ င်သလား၊ မလိုအပ်ပဲအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုမလားဆိုတာသိဖို့။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များလည်ပတ်မှု၊ ဖျော်ဖြေပွဲတက်ရောက်သူ၊ လူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှအနုပညာရှင်အားစိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ဖုန်းမြည်သံဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းစသည့်အချက်အလက်များအားလုံးသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်း၏ထိုက်တန်မှုကိုပြောပြနိုင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအပေါ်တစ် ဦး မျက်စိစောင့်ရှောက်လော့ - သင်စိတ် ၀ င်စားသောအတွေးအခေါ်ရှိရန်နှင့်မည်သည့်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုသည်မဆိုသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအတွက်ကောင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်ကိုသင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အလားတူပင်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုထိပ်ပေါ်မှာဆက်လက်နေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ ကုန်သွယ်ရေးဂျာနယ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များသည်ထိရောက်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပြီး၎င်းတို့သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမရောက်မီထိရောက်သောချဉ်းကပ်နည်းအသစ်များကိုသင်ယူရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဒီ Martech ထုတ်ဝေမှုစာရင်းသွင်းပါ နားထောင်ပါ Douglas Karr'' s ကို Martech Zone Podcast ကိုအင်တာဗျူး! ဆောင်းပါးတိုင်းကိုသင်နားလည်နိူင်မည်မဟုတ်သော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ဗဟုသုတကိုအဆတိုးတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
Admirable ပြည်သူ့ထံမှလှုံ့ဆော်မှုကိုယူပါ - သင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္throughမှတဆင့်သင်၏လမ်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်စဉ်နှိမ့်ချစွာ နေ၍ သင်အထင်ကြီးလေးစားရသူများ၏နောက်ခံကိုအမြဲတမ်းဖော်ထုတ်ပါ။ သူများသည်တစ် ဦး ချင်းစီသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္in၌ပင်ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင့်ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိရန်အကျိုးရှိသည့်အခြေခံမူများကိုသင်ကြားပေးနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ သင့်ကိုလှုံ့ဆော်သူများသည်ကျော်ကြားသူများဖြစ်လျှင် podcasts များကူးယူခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိများဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် Youtube အင်တာဗျူးများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်စဉ်းစားပါ။
Marketing Automation Technologies ကိုရှာဖွေပါ - အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာသုံးသပ်သူများ၏အဆိုအရစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဆိုင်ရာအသိပညာသည်သာဖြစ်သည် သငျသညျရှေ့ဆက်ရကူညီနိုင်ကြောင်း In-demand ကျွမ်းကျင်မှု တစ် ဦး အစဉ်အဆက် - ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှုခင်းသွားလာစဉ်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့လျက်ရှိသောအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိခြင်းအပြင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်လည်းပိုမိုထိရောက်နိုင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်သည်စကားလုံးများကိုပျံ့နှံ့စေခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
စိတ်ရှည်ပါ - သင်၏တိုးတက်မှုရရှိရန်နှင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်ရလဒ်များရရန်သင်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရာတွင်အသစ်စက်စက်အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းစနစ်များအလုပ်မဖြစ်ဟုထင်ရလျှင်သင်စိတ်မရှည်နိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသကဲ့သို့မဆုတ်မနစ်သောသဘောထားရှိပါ။ နေ့ချင်းညချင်းအဓိကအကျိုးအမြတ်ကိုသင်မတွေ့ရပါ။ အထူးသဖြင့်သင်၏သံသယမှန်မမှန်သိရန်အချက်အလက်များကိုမစစ်ဆေးမီစိတ်ရှည်သည်းခံရန်လိုသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ဆက်သွယ်ပါ - ခေတ်မီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်နည်းပညာအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ အရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ဖြင့်မဟာဗျူဟာများကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချရန်နှင့်တိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာများသည်ဤနေရာတွင်ကူညီရန်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများ၏မေးခွန်းများကိုမေးရုံဖြင့်တစ်တန်ခန့်သင်ယူနိုင်သည်။ လူမှုရေးမီဒီယာတစ်လျှောက်လုံးတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသိုင်းအဝိုင်းများအထူးသဖြင့်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပြောဆိုသောသူများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ စကားပြောဆိုမှုတိုင်းကိုသင်နားလည်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏အသိပညာကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးချဲ့ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များကိုသင်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
ကြိုဆိုပါတယ်, New Marketer!
ဒီအကြံပြုချက်ဆယ်ခုကစျေးကွက်သမားသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သတိရသည်မှာသင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှအတည်ပြုနိုင်သောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ယူစရာများစွာရှိသည်။
Tags: ဘယ်လိုစျေးကွက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုစက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းmartechNetwork ကိုကွန်ယက်စျေးကွက်သစ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
Lexie Lu သည် UX ဒီဇိုင်းပညာရှင်နှင့်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဝဘ်ဆိုက်နှင့် UX ဒီဇိုင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အမြဲတမ်းနီးကပ်နေပြီးအမြဲတမ်းနီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ သူမသည်အပေါ်ရေးသားခဲ့သည် ဒီဇိုင်းလှော် နှင့် Twitter ပေါ်တွင်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ် @lexieludesigner.